Saraakiisha amniga Jubaland oo amar la dul-dhigay kadib qaraxii Kismaayo
By Madaxtooyadda Jubbaland
KISMAAYO, Jubaland - Madaxweynaha Dowlada Jubaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa kulan la qaatay Sarakiisha Hay’adaha Amniga iyadoo uu Madaxweynahu faray inay keenan baaritaanada dhacdooyinkii u danbeeyay ee dhinaca Amniga ah oo ay ugu danbaysay qaraxii Shalay Argagixisadu ay la beegsadeen dad Shacab ah iyo Masuuliyiin kasoo baxay masaajidka qadiim ee Magaalada Kismaayo.
Waxaa Madaxweynahu uu ku faray Ciidamada Nabad sugida iyo Booliska inay dardar galiyaan howlgalada sugida nabadgalyada muwaadiniinta isagoo xusay in loo baahan yahay feejignaan dheeri ah.
Madaxweynaha ayaa Sarakiisha Ciidamada Darawiishta ka dhagaystay natiijada howlgalka ka socda wadada xiriirisa Degmooyinka Kismaayo iyo Afmadow isagoo amaanay sida Ciidamada geesiyada ah ay u naafeeyeen Argagixisada.
Gaba gabadii Madaxweynaha waxaa uu sheegay in howlgalada ka dhanka ah Kooxda banaysatay dhiiga Shacabka ay sii socon doonan Ciidamada amaanka Magaalooyinkana looga baahan yahay inay kasoo dhalaalan masuuliyada sugida nabadgalyada.
Talaabadan ayaa dharbaaxo ku noqon karta geedi u socodka oo u baahan in loo wada dhan yahay.
Dagaal beeleed xooggan oo ka qarxay duleedka magaalada Kismaayo
Soomaliya 03.02.2020. 15:07
Jubaland oo meesha ka saartay in ay "gooni-u-goosad" ku dhawaaqdo
Soomaliya 04.10.2019. 11:50
Jubaland oo diidey sharciyo uu ansixiyey baarlamaanka Soomaaliya
Soomaliya 20.02.2020. 15:24
Axmed Madoobe oo shaaciyey qodobka Farmaajo u ololeynayey
Soomaliya 20.09.2020. 20:25
Mareykanka oo ka hadlay xaalada askari looga dhaawacay Soomaaliya
Soomaliya 07.09.2020. 13:20